केएमसीमा १४ दिने बच्चाको यसरी गरियो ‘दुर्लभ’ शल्यक्रिया - Nepalese Times
राजेन्द्र पाण्डे बन्ने भए वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री, शालिकराम जम्मकट्टेलले गरे यस्तो प्रस्ताव ! 10 मिनेट अघि
माओवादीले तोक्यो ३२ विभागका प्रमुख, कुन विभागको जिम्मेवारी कसलाई ? (सूचीसहित) 51 मिनेट अघि
केएमसीमा १४ दिने बच्चाको यसरी गरियो ‘दुर्लभ’ शल्यक्रिया
नेप्लिज संवाददाता २६ आश्विन २०७८, मंगलवार ०६:५८ (1 हप्ता अघि) १८० जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेजमा १४ दिनको नवजात शिशुको ‘दुर्लभ’ शल्यक्रिया गरिएको छ। नवजात शिशुमा देखिने जटिल एवम् दुर्लभ मानिने ‘कनजेनिटल डायफ्रामाटिक हर्निया’को शल्यक्रिया गरिएकोे हो।
थापाथली अस्पतालमा सिनामंगल गैरीगाउँका सरस्वती तामाङबाट जन्मिएको बच्चामा हर्निया देखिएपछि केएमसी अस्पतालमा रेफर गरेर पठाइएको थियो । शल्यक्रियामा संलग्न डा.आशिषलाल श्रेष्ठका अनुसार बच्चाको पेट र छातीको बीचमा हुने ‘डायफ्राम’ मांसपेशीमा प्वाल थियो।
पेट र छातीलाई छुट्याउने पत्र (डायफ्राम) मा प्वाल परेका कारण पेटभित्र रहनुपर्ने कलेजो, आन्द्रा, आमासय र फियो छातीमा पुगेको डा.श्रेष्ठले बताए ।
जसका कारण बच्चालाई श्वास फेर्न गाह्रो भएको थियो। सामान्यतया ३७ हप्तामा बच्चा जन्मिने भए पनि सरस्वतीले ३५ हप्तामै छोरालाई जन्म दिएकी थिइन्।
थापाथलीको प्रसूति अस्पतालमा नर्मल डेलिभरी भएको सो बच्चालाई रेफर गरेर केएमसी पठाइएको थियो। केएमसीका बाल तथा नवजात शिशु सर्जन डा. आशिषलाल श्रेष्ठ नेतृत्वको चिकित्सकहरूको टोलीले बच्चाको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेको थियो।
डायफ्राम प्वाल परेर छातीमा पुगेको कलेजो, आन्द्रा, आमासय र फियोलाई शल्यक्रिया गरी पेटमा ल्याएर प्वाल टालेको डा.श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तो समस्या हुँदा विकसित हुँदै गएको फोक्सोको विकास क्रमलाई रोक्ने र श्वास फेर्न गाह्रो भएर बच्चाको ज्यान जाने जोखिम हुने उनले बताए।
तर, अप्रेसन सफल भएर जोखिम टरेको उनले बताए। यो निकै जटिल र दुर्लभ समस्या भएपनि आफूहरुले हिम्मतका साथ शल्यक्रिया गरी बच्चालाई स्वस्थ पारेको जानकारी उनले दिए ।
समय नपुग्दै जन्मेको बच्चा, आमाको दुधभन्दा अन्य कुरा खुवाउँदा समस्या हुने र बेहोस पर्दा होस खुल्न गाह्रो हुने जस्ता कारणले यस्तो शल्यक्रिया जटिल हुने गर्दछ । ५ हजार बच्चा जन्मिंदा एकजना बच्चामा मात्र यस्तो समस्या हुने उनले जानकारी दिए ।
अप्रेसनपछि नवजात शिशु विशेषज्ञ सुनिल राजा मानन्धरको प्रत्यक्ष निगरानीमा बच्चालाई दुई हप्ता अस्पतालमा राखिएको थियो। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य बनेपछि शुक्रबार डिस्चार्ज गरिएको थियो ।
केही साता अघि मात्र केएमसीले नेपालकै सवैभन्दा ठूलो र अत्याधुनिक सुविधासहितको नवजा शिशु सघन कक्ष र बाल रोग सघन उपचार कक्ष सञ्चालमा ल्याएको थियो ।
शल्यक्रियाको नेतृत्व गरेका डा. आशिषलाल श्रेष्ठ अहिले नेपालको पहिलो र एकमात्र ‘एमसीएच पेडियाट्रिक सर्जन’ हुन्। भारतको तेमिलनाडुस्थित क्रिश्चियन मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस, एमएस गरी सन् २०१७ मा उनले पेडियाट्रिक सर्जनमा एमसीएच (म्याजिस्टर चिरर्जी ) गरेका थिए ।
एमएसपश्चात पाल्पाको मिसन अस्पताल र एमसीएचपछि पाटन अस्पतालमा सर्जन भएर काम गरेका डा.श्रेष्ठ ग्राण्डी अन्तराष्ट्रिय अस्पताल, नर्भिक अस्पताल हुँदै अहिले केएमसीमा कार्यरत छन् ।
नवजात शिशुदेखि किशोर बालबालिकाहरुको जटिलभन्दा जटिल अपरेशनका लागि उनी एकमात्र प्राज्ञिक र अनुभवी चिकित्सक हुन् । एमसीएच पूरा गरेका पेडियाट्रिक सर्जन नेपालमा खासै उपलव्ध छैन ।
एमसीएच पेडियाट्रिक सर्जरी नेपालमा नयाँ विषय भएकाले र यो विषयको नेपालमा पढाइ हुने नगरेको हुँदा यो विषयका विशेषज्ञ नेपालमा उपलव्ध नभएको हो । राजधानी दैनिकबाट